တရုတ်နိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးဆိပ်ကမ်း တံခါးဖွင့်အစီအမံ ထုတ်ဖော်ပြသ - Xinhua News Agency
ဟိုင်ခို၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဟိုင်နန်ပြည်နယ်ကို နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ခရီးသွားရောက်ရာနေရာတစ်ခု ဖြစ်လာစေရန် အခွန်ကင်းလွတ်ဈေးဝယ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာပညာရေး အပါအဝင် ကဏ္ဍသုံးခုတွင် ကိုက်ညီမှုရှိရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ၂၀၂၁-၂၀၂၅ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းအရ သိရသည်။အဆိုပါ ကျွန်းပြည်နယ်သည် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေးဆိပ်ကမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းသည် မကြာသေးမီက ပြည်နယ်၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် ၂၀၂၅ ခုနှစ်မတိုင်မီ စုစုပေါင်း စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၏ ၁၇.၈ ရာခိုင်နှုန်း ထောက်ပံ့ပေးရန် ရည်မှန်းချက် ချမှတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် Hainan Boao Lecheng နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ရှေ့ပြေးဇုန်တွင် ပင်မဆဲလ်၊ ကိုယ်ခံအားဆဲလ်နှင့် မျိုးဗီဇကုထုံးနှင့် ဇီဝဆေးပညာကဏ္ဍ၌ အခြားနည်းပညာသစ်များထပ်ပေါင်းခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရေး နောက်ဆုံးပေါ်နှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ မိတ်ဆက်ရန်နှင့် ပျိုးထောင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ရှေ့ပြေးဇုန်သည် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး (RCEP) တွင် ချိတ်ဆက်ထားသောနိုင်ငံများမှ ပြည်သူများအား တွန်းအားပေးခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၅ ခုနှစ်မတိုင်မီ Lecheng သည် ဟိုင်နန်ရှိ ပြည်သူ ၅၀၀,၀၀၀ ခန့်အား ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုရရှိရန် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်း စီမံကိန်း၌ ဖော်ပြထားသည်။
ပညာရေးကဏ္ဍအတွက်မူ ဟိုင်နန်သည် ပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံရပ်ခြား ကောလိပ်များနှင့် ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ လာရောက်အခြေချရန် တိုက်တွန်းအားပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဟိုင်နန်ပြည်နယ်တွင် နိုင်ငံတကာကျောင်းသား အရေအတွက်မှာ ၂၀၂၅ ခုနှစ်မတိုင်မီ ၁၀,၀၀၀ အထိ ရောက်ရှိလာမည်ဟု မှန်းထားကြောင်း၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်မတိုင်မီ နိုင်ငံတကာ အထက်တန်းကျောင်းနှင့် မူကြိုကျောင်း ၁၅ ခုခန့်နှင့် နိုင်ငံခြား အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်များနှင့် သိပ္ပံ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆေးဝါးဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကောလိပ် သုံးခုကျော် မိတ်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဇွန်လက တောင်ဘက်စွန်းပြည်နယ်ဖြစ်သော ဟိုင်နန်ပြည်နယ်အား ရာစုနှစ်လယ်တွင် ကမ္ဘာ့လွှမ်းမိုးမှုရှိပြီး အဆင့်မြင့် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးဇုန်အဖြစ် တည်ဆောက်ရေး မာစတာပလန် တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
HAIKOU, Nov. 17 (Xinhua) — South China’s Hainan Province plans to lock in three sectors, including duty-free shopping, international medical care and international education, in its drive to become an international tourism and consumption destination, according to its 2021-2025 development plan.
Last June, China releasedamaster plan to build the southernmost province intoaglobally influential and high-level free trade port by the middle of the century. ■
Photo : People shop ataduty-free store in Haikou, capital of south China’s Hainan Province, Nov. 10, 2020. (Xinhua/Guo Cheng)
ရှီကျင့်ဖိန်က တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဟိုင်နန်ပြည်နယ်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
“တရုတ်နိုင်ငံ၏ အပန်းဖြေကျွန်း ဟိုင်နန်သည် နယူးဇီလန်မှ ကျောင်းဆရာအား ဆွဲဆောင်လျှက်ရှိ”